Wabi-Sabi: Maitiro Ekumbundira Iyo yeJapan Philosophy YeRunako Mukusakwana - Pfungwa
Nzanga yemazuva ano inoisa huwandu hunosekesa hwekusimbisa kukwana.
Kwese kwaunotendeukira, kune kushambadza uye zvinyorwa zvinokurudzira zvese kubva kuganda rakakwana kuenda kudzimba dzakakwana uye hukama hwakakwana.
Hazvishamise kuti vanhu vakaputirwa nekushushikana uye kushushikana kana paine kumanikidza kwakawanda kuti zvinhu zvese zvive zvakasununguka zvakakwana nguva dzose.
Asi, munhu wese ane yake pfungwa yezve kukwana kukwana.
Saka nekudaro, isu tinofanirwa kuzvibvunza isu kuti ndevani vavariro yatinorwira?
Ndiani akasarudza izvo zvinoreva kukwana chero chinhu , uye nei pasi pano maonero avo achikosha?
Ichi chinyorwa chinoongorora yakanakisa huzivi hweJapan iyo inorasa pfungwa yekukwana, uye pachinzvimbo inopemberera izvo zviri zvine mbiri zvisina kukwana .
Chii chinonzi Wabi-Sabi?
Yakadzika midzi Zen Buddhism , Wabi-Sabi ndiko kutenda kwechokwadi kwezvinhu zvisingagumi, zvisina kukwana, uye zvisina kukwana.
Iyo inopemberera runako mune izvo zvakasikwa: kwete kunyangwe paine zvikanganiso, asi nekuti wavo.
Funga nezve chisingatsanangurike chakanakisa, chakakandirwa ruoko chidimbu chehari yeJapan…
Kunyangwe zvidimbu zvakagadzirwa nemasters zvichave nekukanganisa kushoma mune avo maumbirwo. Glaze ichaoma chero ichishuvira, kunyangwe ichishandiswa zvinehunyanzvi.
Chinhu chimwe nechimwe chakapedzwa inyanzvi uye chinozokosheswa nemuridzi wayo.
Ivo vanozokoshesa yega yega glaze kudonha, yega yega wonky rim kana isina kuenzana base, nekuda kwekuti vanoida chaizvo sezvazviri .
Zvirinani zvakadaro, ivo vanokoshesa chidimbu nekuti ivo vanoziva kuti hachigumi. Mukombe uyo unozoputsa, saka vanonakidzwa nazvo zvakanyanya Munguva ino .
Kana tii ikagoverwa mumhemberero yechiBhudha, inodururwa mumabhodhoro kana makapu ane zvese zvakakanganisika.
Panzvimbo pekuzvidzwa nekuda kwekukanganisa kwavo, iyo makapu anokosheswa nekuremekedzwa nekuda kwekukanganisa kwavo.
Ivo vanoyeuchidza avo vanotora chikamu mumhemberero kuti zvinhu zvese hazvina kukwana, uye zvese hazvigone, uye zvichazopedzisira zvaenda.
Yese chip uye kutsemuka inotaurira nyaya. Yese isina kuenzana rim inoimba nziyo pamusoro pemaoko ane rudo akaumba ivhu.
Saka nekudaro, ivo vanofanirwa kukosheswa chaizvo sezvavari, mune ino nguva, iyi yekufema.
Tora kanguva uye funga nezvekuti zvinganakidze sei kuwedzera iyo uzivi kune ese mativi ehupenyu hwezuva nezuva…
… Kubva pabasa ratinoita kusvika pakuona kwatinoita hukama hwedu, dzimba dzedu, uye kunyangwe miviri yedu.
Gamuchira Miviri Yedu 'Kusagadzikana
Imwe nharaunda umo vanhu vazhinji vanozvirova vamene nokuda kwokusakwana iri muzvitarisiko zvavo vamene.
Mangani ma anti-kukwegura kana bvudzi dhayi maonesheni aunoona zuva nezuva? Ko zvakadii neanti-cellulite makirimu? Waxing kits kune isingadiwe musana bvudzi?
Zvese izvo zvigadzirwa zvinogadzira kusachengeteka kwevanhu nezvechitarisiko chavo, kunyanya sekukosha kwekukwegura kwedu.
Wabi-Sabi anokurudzira vanhu kuti vagamuchire kusagadzikana uye vatende zvinhu sezvazviri panguva ino, uye izvi zvinonyanya kukosha kana zvasvika pamiviri yedu.
Iyi miviri, semikombe inodiwa yeceramic, ingori midziyo yenguva pfupi.
Nenzira imwechete iyo yakanaka teacup inobata inonhuhwirira, inonaka tii, miviri yatinogara iye zvino midziyo yehupenyu hwedu hwemweya.
Kufanana neaya teacups, ayo anotsemuka uye opera uye pakupedzisira kupwanya, miviri yedu inozodzikira uye ichichinja kudzamara ivo voputsa zvakare.
Icho chingori chikamu cheichi chiripo chehupenyu hwevanhu.
Chero iwe paunoona kuti uri kutsoropodza pamusoro pechimwe chikamu chemuviri wako, tora chinguva uye funga nezvekuti ungave unoonga sei panzvimbo.
Uri kuchema tsoka dzegunguwo kana mabhegi akakomberedza maziso ako?
… Funga nezvese runako urwo maziso ako anotendera iwe kupemberera zuva nezuva, uye rangarira kuti mutsara wega wega wakaumbwa nezviuru zvekunyemwerera kwechokwadi uye dumbu rinoseka.
Mabhanzi anoiswa mucherechedzo mushure mekubata pamuviri abatsira kuunza hupenyu hutsva hwakanaka munyika.
Mitumbi yakasiyaniswa zvakasiyana, uye inogona kusashanda nenzira yakafanana nevamwe, ichiri midziyo inoshamisa inobvumidza vanhu kunzwa mimhanzi, kana kuona kunaya kwakapfava paganda ravo, kana kuravira chikafu chinonaka kwazvo.
Kana isu tagamuchira kusagadzikana uye nekukudziridza kuonga mune ino nguva, zvinoshamisa kuona kuti hasha sei, kuzvishora , nyadzi, uye mamwe manzwiro asingabatsiri anowira pasi.
Asi, vanochinjwa nekukoshesa, uye hunyoro kubva pakuziva kuti zvese izvi ndezvenguva pfupi.
Saka nekudaro, zvakakosha kukoshesa nekupemberera izvo zvatiinazvo, kana tiinazvo.
Kana uine bhuku, kunyora chimwe chinhu zuva rega rega nezvekutenda kwaunonzwa nezve muviri wako inzira yakanaka yekupemberera Wabi-Sabi muhupenyu hwako.
Manheru ega ega, usati warara, funga nezvezvishoma zvinhu izvo muviri wako wakanaka zvawakagonesa kusangana nazvo kana kunakidzwa nhasi, uye nekuzviona.
Wakatora kufamba kwakanaka here kunze kwezuva? Zvigunwe zvako zvakakombama pawaiona chikafu chinonaka here?
Nyora izvo pasi, zvese zvacho. Nekufamba kwenguva, iwe uchaona kuti kukoshesa kwako kuchapfuura kutaura kwako kwakashata.
Zvinotora nguva, kunyanya kana iwe wajaira kuzvishora, asi zvichaitika.
Kugamuchirwa MuZvinhu Zvese Chakakosha
Sezvambotaurwa, vanhu vazhinji vanotambura nekushushikana kukuru uye / kana kushushikana nekuti zvikamu zvehupenyu hwavo hazvina kukwana sezvavanofunga kuti vanofanirwa kuve.
Apa ndipo panouya chimwe chidzidzo cheBuddhist uzivi.
'Kurwadziwa hakudzivisiki, asi kutambura ndekwekusarudza.'
Kutambura kunoitika kana tichida kuti chimwe chinhu chive chimwe kunze kwezvazviri.
Patinogamuchira zvinhu sezvazviri, uye tichiedza kukoshesa zvese zvatinogona pamusoro pazvo, kutambura kwakanyanya kunonyangarika.
Munhu anogona kupedza hupenyu hwavo hwese achichema chokwadi chekuti ivo havana kureba zvakakwana (kana kureba zvakanyanya), kana kuti havana vhudzi rebvudzi ravaigara vachida, kana ivo havana kugara nhaka yeziso remaziso ravakarota.
Saizvozvowo, vangangoshandisa yavo yese yakakosha (uye yakaganhurirwa) nguva yemahara kupopotedzana nezve mamiriro edzimba dzavo…
Kwavari, imba yavo inogona kusambove yakachena zvakakwana, yakatsvinda zvakakwana, kana mufashoni zvakakwana.
Vanogona kunge vachigara mufurati diki pane imba hombe.
Kana, kana vari kugara mumba hombe, vanogona kuchema nenyaya yekuti kushongedzwa kwavo hakuna mavara akakodzera, machira avo haachisiri echinyakare, uye dhishi ravo rakatemwa.
Kwese kusagadzikana uku kunogona kuvatadzisa kukoka shamwari kuzodya navo.
Saka vanhu vazhinji vanonyara nekusakwana kwemisha yavo zvekuti vangatogara pamba, voga uye vakasuruvara, pane njodzi yekunzwa kusakwana nekuva nekambani pamusoro.
Hechino chinhu: isu hatimboziva kuti hupenyu hwedu huchafamba sei kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera.
Mamiriro ezvinhu anogona kuchinja zvakanyanya: isu tingatofanira kufamba kwechinguva, kana dutu rinogona kukuvadza chikamu cheimba, kuchichinja zvachose.
Iyo nyonganiso yakasikwa nevana vako yekuti unoshingirira kurongedza pamberi pekambani inouya?
Hongu, izvo: unonyatsoda here kuviga humbowo hwekuti vana vari kuwana mufaro uye nehunyanzvi mumba mavo?
Zvakakosha here kuyedza kufadza vamwe vanhu nemamiriro eimba isina gwapa pane kutambira nekukoshesa kongiri inofara yakagadzirwa munzvimbo yenyaradzo uye nechiedza?
Hezvino zvinhu zvinoshamisa zvinoshamisa kugamuchira:
Imba yako haife yakachena zvakakwana, nekuti unogara mairi, uye hupenyu hwakanetsa.
Zvinhu zvinoyerera uye zvichibuda muchitaira nguva dzese, saka kana iwe uine zvinhu mumba mako zvinokuita kuti ufare, pane kuve wakakurumbira, nakidzwa nazvo!
Iwe une muviri wawakapihwa, wehupenyu hwese. Iwe unogona kunge uchikwanisa kushandura zvikamu zvacho izvozvi uye ipapo, asi zvakakosha kuti uzvikoshe sezvazviri, izvozvi.
Mamiriro ehupenyu sezvaari. Zvese zvinhu zvinoshanduka, zvese zviri muchimiro chenguva dzose yekufashukira, uye pasina mubvunzo uchasangana nemamiriro akasiyana zvekare munguva pfupi iri kutevera.
Iko hakuna chaiko chikonzero chekushatirwa kana kutsamwa kana zvinhu zvakuvadzwa kana kuputswa. Yakanga iri nguva yavo yekutyora, uye kukuvara kunongouya nekushandisa.
Hufambidzani hwako ndihwo hunokosha kuvanhu: kwete ruvara rwesofa rako.
Rangarira izvo journaling exercise isu takabata pamusoro pekutanga, mawakakurudzirwa kunyora pasi zvishoma zvinhu zvaunonyatsokoshesa nezve muviri wako?
Funga kutaura zvimwe zvinhu zvaunoda nezve imba yako futi.
Zvakanaka kutaura kusagadzikana kana kuona zvikanganiso, chero bedzi iwe ukaisa kusimbisa pane izvo zvakanaka uye zvakakosha ipapo. Semuyenzaniso:
'Bindu rangu idiki, asi rinondibvumidza kurima maruva akanaka nemiriwo inonaka.'
'Kicheni yangu yakasviba, asi ndakabheka masinamoni rolls nevana vangu masikati ano uye ndichagara ndichiyeuka kunyemwerera kwavo patakavaravira'.
Edza kutora chinguva kuti uone runako mune yega yega zvimomarara, madziro ese anodhirowa, yega guruva chipembere.
Iripo, kana isu asi tichizvibvumira isu kuti tione pane kungoishora nekukasira.
Maitiro Ekukurira Kukwana: 8 Nzira dzekugamuchira Zvishoma Kupfuura Izvo Zvakanakisa
Nei Kurega Izvo Zvaunotarisira Zvicha Tungamira KuMufaro Mukuru
Maitiro Ekugashira Vamwe Kune Zvavari
Sei Ndinozvivenga Zvakanyanya?
Ndini ani? Iyo Yakadzika Buddhist Mhinduro Kumubvunzo Unokatyamadza
Kana iwe wakamboruma mu organic, heirloom tomato iyo yanga ichidziya muzuva zuva rese, iwe unoziva kuti ndicho chimwe cheakanyanya kunaka manakiro ezviitiko auchazosangana nawo.
Zvakakomba, zvinoita sekutora kuruma kwezuva rinotapira rezhizha, neinonaka kwazvo yemadomasi-y yaungazosangana nayo.
Izvo zvakare zvinopfuura zvingangodaro kuti iwo wedenga renhaka rawakatora raive nechimiro chakasarudzika, zvisina kufanana neunifomu, GMO, dzakakurira greenhouse dzinowanikwa pamagirosa.
Asi, ko iyo manakiro aive akaita sei achienzaniswa neaya akatanhwa kare uye akamanikidzwa kuibva mumarori ekufambisa? Iwo ekupedzisira ari mealy, uye anonyanya kuravira kunge asina kujeka madomasi-akaumbwa makadhibhokisi.
Imba yako inogona kusamboita nzira yayo kupinda muVogue magazini maitiro ekupfura, asi izere nehupenyu, nerudo, nemumhanzi, uye mufaro.
Uri kunyara here nekuti une fenicha isina kuenzana? Sei zvichikosha kuti ienderane?
Kwakanaka here? Inzvimbo yako inokupa iwe mukana wekushandisa nguva nevako vaunoda?
Une shamwari inokosheswa nemhuka ine nzvimbo yaunofarira pasi pano pane iyo inonzi 'yakashata' mubhedha, yakakomberedzwa padivi pako?
Wedzera kuonga ikoko kubasa rako, muwadhiropu yako, kunyangwe muviri wako wega.
Wadhiropu yako inogona kunge isingaite inosvika padanho sezvazvino fashoni fashoni, asi mikana ndeyekuti iwe unopfeka mbatya dzinoenderana hunhu hwako hwakasiyana , uye izvo zvakakosha chaizvo.
Kusvika pakuonekwa, funga nezvevanhu vese vane mukurumbira vane (kana vane) chimwe chinhu chakasarudzika kana chisina kujairika nezve maitarisiro avo, uye kuti zvakavaita sei kuti vamire pakati peboka.
Vamwe vangashora chitarisiko chavo, asi hunhu uhu hunovaita zvavari…
… Kungofanana nezvose zvine mbiri zvakasiyana uye zvakasarudzika pamusoro pako zvinokuita iwe zvauri.
Edza kumbundira chidimbu chayo chose sekuve chaizvo sezvaaifanira kuve.
Kusakwana Uye Kusagadzikana Muhukama
Mativi ese ehupenyu hwedu haagumi. Ichi chokwadi chinosimbisa kudiwa kwekuti isu tese tichinyatsoda zvinhu sezvazviri, munguva.
Hapana hukama huchave 'hwakakwana'
Kwete pakati pevabereki nevana, kana pakati pevanodanana kana shamwari dzepedyo.
Izvi zvinodaro nekuti isu tese tinogara tichichinja, uye tine zvinhu zvisingaverengeke zviri kuitika muhupenyu hwedu zvinokanganisa zvese zvehupenyu hwedu.
Kushamwaridzana nemumwe munhu arikuendawo kuburikidza neshanduko zvinoreva kuti pachagara paine nguva dzekupokana pakati pezvakanaka, zvinofadza zviitiko.
Zvakakosha kuti usazvizvidza kana paine kunetsana muhukama hwehukama, kana kana husinga fanane nezviri kusangana nemumwe munhu.
Humwe neumwe hwehukama hwako hwakasiyana zvachose muchadenga, uye zvirizvo, ZVAKAKOSHA kusaenzanisa hupenyu hwako nehweumwe munhu.
Rangarira kuti iwe unongopupurira izvo vamwe vanhu vanosarudza kugovana newe: pane zvakawanda zvirikuitika pasi pechiso iwe zvausingazive nazvo.
Kana uchikwanisa, tora mabhureki kubva pasocial media pese pazvinogoneka. Vanhu vanowanzo govana chete akanakisa uye akajeka mamiriro ehupenyu hwavo pane avo ezvekudyidzana feeds, izvo zvinopa kunyepa kwekunyepedzera kwekuti ivo hupenyu hwavo hwakaita sei chaizvo.
Kuve pachena kune iyi inogara ichirwiswa yekunyepedzera kukwana kubva kumativi ese, nguva dzese, zvakabatsira zvakanyanya kune vamwe vanhu kusagadzikana uye zvishuwo zvekurwira kukwana kwavo.
Pane kudaro, tendeukira mukati.
Kuvapo, funga, uye uve usingatsanangurike unokoshesa zvese uye nemunhu wese muhupenyu hwako.
Kunyanya iwo 'akakanganisa' mabheti, seaya anowanzo kuve akakosha kwazvo, mukutarisisa.
Kukwana Inyaya Ye Kufarira Kweumwe Neumwe
Huffington Post yakamhanyisa zvinyorwa zvinoverengeka zvinonakidza chinguva chakapfuura nezve izvo vanhu kutenderera pasirese vanoona sekukosha, kusvika dzevakadzi uye zvevarume miviri ine hanya.
Mhedzisiro yacho yainakidza, kana zvichikanganisa.
Vanhu vanobva kunyika gumi nesere dzakasiyana vakatora mifananidzo iyi kuti varatidze zvirinani zvavaifunga semitumbi yemurume nemukadzi yakakwana, zvichiteerana.
Fembera chii? Mazano avo ese nezve kukwana aive akasiyana.
Vamwe vakasarudza murume kuti ave mutete, ane chipfuva chisina bvudzi uye akatsanangurwa abs, nepo vamwe vaimusarudza iye stockier, aine bvudzi rakakura repachifuva.
Zvimwechetezvo, vamwe vakatora mafoto mukadzi kuti ave nechipfuva chakakwana uye chiuno chakamonana, nevamwe chakamuita mutete uye mudiki kutaridzika.
Izvi zvinodzokorora chokwadi chekuti kukwana chaiko kuri muziso reanoona.
Kunyangwe isu pachedu pfungwa dzekukwana dzinoda kuongororwa zvakare: iwo ndiwo mazano edu here? Kana kuti vakafurirwa nevamwe vanhu here?
Kana zviri zvekupedzisira, izvi zvinorevei kune maonero edu pachedu? Zve dzimba dzedu, zvinhu zvedu, uye hukama hwedu?
Funga nezve vese vakasiyana vanhu vaunoziva, uye wobva wafunga nezve dzimba dzavo, kwavo kuwadhi, mabasa avo, hukama hwavo.
Unoziva here vanhu vaviri vane hukama hwakafanana?
Vamwe vakaroorana vane vana, vamwe havana. Vamwe vane murume mumwe chete, vamwe vane polyamorous.
Kune avo vanofarira kurwa nevakaroora, uye avo vanosarudza runyararo uye kudzikama.
Kana hukama huri kuzadzisa kune wese munhu anobatanidzwa, saka ndizvo zvakakosha.
Runako, rudo… izvo zvidiki zvidiki zvehunhu husina kukwana hunofanira kupembererwa, kwete kana vaviri vacho vachitaridzika zvakanaka kune munhu anenge achipfuura, kana kana vachikodzera zvinoenderana neruzhinji rwekuti mhuri 'inofanirwa' kutaridzika sei.
Wabi-Sabi ndiwo mufaro uye kuzadzikiswa kwaunowana kana wakazvimbundikira newaunoda musanganiswa yemagumbeze asina kuenzana, akaputika, kupenya kwezuva pamusoro pemaoko akabatanidzwa.
shamwari dzinotaura kumashure kwako
Maoko iwayo anogona kunge akacheka nzara, makushe, mavanga, kunyangwe zvisipo minwe…
… Uye ivo vakakwana mukukanganisa kwavo, kwakasarudzika kunaka.
Kusiya Iyo Pfungwa Ye Kukwana Iri Kusunungura Zvikuru
Iwe ungave ani kana iwe usiri kugara uchiedza kurarama zvinoenderana nezvinodiwa nemumwe munhu?
Ndeipi nhanho yemufaro iwe yaunogona kuwana kana iwe ukapedza nguva dzese dzekumuka uchikoshesa zvinhu zvese zvakanaka zviri munyika yako, panzvimbo pekufungisisa pamusoro penyonganiso idiki iyo 'inofanirwa' kutorwa, kana zvidya izvo 'zvinofanirwa' kusimba?
Munyori Richard Powell - ane bhuku rake Wabi Sabi Zvakareruka inofanirwa-kuverenga - ine chirevo ichi chekugovana:
'Kugamuchira nyika seisina kukwana, isina kupera, uye inononoka, uye nekudzika nekupemberera chokwadi ichocho, chinhu chakasiyana nerusununguko.'
Makore mazhinji apfuura, ndaive nehope umo ndakapihwa chipande chehuswa mubhokisi remuti. Ndakanga ndavhiringidzika pandakaizviona, ndikabvunza mupi kuti chii chakakosha nezvazvo?
Mhinduro yake yakandishamisa, asi yakanga yakanaka kwazvo. Akati:
“Vanhu havawanzopa huswa kupfuura kungofunga. Vanofamba pamusoro payo, vanocheka vasina kumbomira, vanoshandisa iyo kufudza mhuka, vanotsamwiswa kana ikakura zvakanyanya. Sei vaizotora nguva yekufunga nezvazvo? Ingori huswa, handiti?
Dai vakangoita asi vakatora chinguva, vaizoziva kuti rimwe rega idiki chishamiso pacharo pacharo: chimwe nechimwe chinoyera, uye chakakwana chose, uye hachifaniri kutorwa sechinhu chisina basa. ”
Fungidzira kuti hupenyu hwedu hunogona kuve hwakakosha uye hutsvene sei kana tikakoshesa nekupemberera zvese sezvazviri zvakakwana chaizvo sezvazviri .
Pasina kupiwa mhosva.
Pasina kunzwa kusakwana.
Inonzwika zvakanyanya kukosha uye kusunungura, handizvo here?
Ngatiedzei tese kupinza zvishoma Wabi-Sabi muhupenyu hwedu, uye nekuikurudzira mune vamwe zvakare.
Zvese zvakatikomberedza hazvina kukwana zvakakwana, mune inogara iri mamiriro ekuchinja.
Ngatifungei zvakanaka nezvese mativi, tibate zvese (uye mumwe nemumwe) nekugamuchirwa kwakazara uye hunyoro, uye tenda zvese zvatiinazvo, tichinazvo.
kurega shamwari dzine hukama hukama
kuunganidza hupenyu hwako pamwe chete
zvinhu kusvika iwe pawakasuruvara
kuudza kupwanya iwe wakafanana navo
rega kutaura kuti ndizvo zvazviri
kukuda vs mukuda newe